အကြောင်းအရာဖန်တီးမှု၏အရွယ်အစား ၃ Martech Zone
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2014 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2014 Douglas Karr
အင်တာနက်ပေါ်မှာအကြောင်းအရာတွေအများကြီးထုတ်နေတုန်းပဲ၊ ငါဟာရှာဖွေရေး၊ လူမှုရေးနဲ့မြှင့်တင်ရေးတို့ကတဆင့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုရှာဖွေဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။ ငါဘယ်လိုမှာတုန်လှုပ်သွားပါတယ် တိမ်သော အများအပြား အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ ကော်ပိုရိတ်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်။ အချို့မှာမကြာသေးမီကကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများနှင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အချို့မှာစာရင်းများစွာရှိသည်၊ အချို့မှာ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များအကြောင်းအင်္ဂါရပ်များထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးအချို့မှာမူအကြီးအကျယ်အတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်မှုပါဝင်မှုရှိသည်။
အကြောင်းအရာအများစုကိုကောင်းစွာထုတ်လုပ်သော်လည်း၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်တူညီသောစာတိုပေးပို့မှုသည်အကြောင်းအရာအလိုက်အတူတူအလတ်စားနှင့်အတူတူညီသော visit ည့်သည်ကိုသာအာရုံစိုက်သည်။ ကျနော့်အမြင်မှာမျှတတဲ့အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာအတွက်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
Persona ဆက်သွယ်မှု - ၎င်းသည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်တွင်အလွန်အမင်းအလွန်အကျွံသုံးခြင်းခံရနိုင်သောစကားလုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏အဓိကအချက်မှာသင်၏ site သို့လာရောက်လာသော diverse ည့်သည်အမျိုးမျိုးကိုသင်ပြောနေသည်ဖြစ်စေမရသည်မှာသာဖြစ်သည်။ ငါပြောတဲ့အခါ စကားပြော၊ ငါဆိုလိုတာကသင်ရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဟာသူတို့နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရဲ့လား။ ကျနော်တို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအတော်လေးနည်းနည်းရေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုငါတို့ကွာခြားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများအတွက်အစပြုသူများထံမှအဆင့်မြင့်သူများဆီသို့စာရေးပို့သည်။ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် code ကိုရေးရန်လုံလောက်သောအဆင့်မြင့်သူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ည့်သည်ရည်ရွယ်ချက် - why ည့်သည်သည်သင်၏အကြောင်းအရာကိုဘာကြောင့်သုံးစွဲနေတာလဲ။ သူတို့ဝယ်ယူသံသရာအတွက်ဘာခြေလှမ်းမှာ? သူတို့သည်သုတေသနလုပ်နေသူများနှင့်သင်၏အကြံဥာဏ်များနှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပညာပေးနေသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလား။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟာဘတ်ဂျက်ရှိပြီး ၀ ယ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ visitors ည့်သည်တွေလား။ သင်နှစ် ဦး စလုံးရောက်ရှိရန်အကြောင်းအရာကွဲပြားပါသလား သင်ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည် the ည့်သည်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဘို့အ optimized သောအကြောင်းအရာ.
အလတ်စားနှင့်လိုင်းများ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေစဉ်အလတ်စားများကိုမကြာခဏလျစ်လျူရှုထားသော်လည်းမီဒီယာအမျိုးအစားသည်ထိရောက်သောအကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ရာတွင်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ visitors ည့်သည်များသည်အကြောင်းအရာကိုသုံးသောနည်းလမ်းသုံးမျိုးကိုသင်ကျွေးပါသလား အမြင်အာရုံ, အာရုံနှင့် kinesthetic interaction ကသော့ဖြစ်ကြသည်။ Whitepapers, eBooks, infographics, mindmaps, ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အီးမေးလ်များ၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုပိုမိုများပြားသောရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ရုပ်သံလိုင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်လည်းအထောက်အကူပြုသည်။ ဗီဒီယိုအတွက် Youtube၊ ပုံရိပ်အတွက် Pinterest၊ အရေးအသားအတွက် LinkedIn စသည်။
စတင်ရန်၊ ကော်လံသုံးခု - ပုဂ္ဂိုလ်၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အလတ်စားများဖြင့်စာရွက်ပေါ်တွင်ဇယားကွက်တစ်ခုလုပ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်လကတန်ဖိုးရှိအကြောင်းအရာများကိုအတန်းများအဖြစ်ထည့်ပြီးအသေးစိတ်များကိုဖြည့်ပါ။ သင်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကိုမြင်နေရသလားသို့မဟုတ်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံပါ ၀ င်သည့်မဟာဗျူဟာကိုတွေ့မြင်နေသလား။ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်သင်ဖန်တီးထားသောလုပ်ဆောင်မှုကိုအထူးသဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအတည်ပြုသည့်အသုံးပြုသူလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဤအရာအားလုံးကို align လုပ်နိုင်လျှင်သန့်ရှင်းသော grail ကိုသင်ရရှိသည်။
အကယ်၍ စတုတ္ထမြောက်အတိုင်းအတာရှိခဲ့လျှင်သင်၏ပါဝင်မှုသည်မည်မျှနက်ရှိုင်းသည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ “ နည်းလမ်း ၅ ခု” သို့မဟုတ်“ Surefire နည်းလမ်း ၁၀ ခု” နှင့်အခြားစာရင်းများစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းနေသောဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားအမြန်စားသုံးမှုများအတွက်လုပ်အကြောင်းအရာအတိမ်အနက်ကို -bits ဖြစ်ကြသည်။ ဤနှင့်အခြားအလွန်မြင့်မားသောအမြင်အာရုံပါသောအကြောင်းအရာများသည်ဝေမျှနိုင်ပြီးသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်စေနိုင်သည်။ စာဖတ်သူကိုစိတ် ၀ င်စားပါကစာဖတ်သူကိုaည့်သည်မှဖောက်သည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသူတို့မပေးနိူင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စာဖတ်သူများကိုဆွဲဆောင်သောကြောင့် infographics နှင့်စာရင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မျှဝေသည်။ ဒါပေမယ့်စာဖတ်သူတွေနဲ့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြီးသူတို့နဲ့ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုဆီကိုမောင်းနှင်ဖို့ဆိုရင်၊ ဒီ post လိုမျိုးပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေးရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအခြားနည်းဗျူဟာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာခဏဘလော့ဂ်ပို့စ်များမှစတင်ပြီးသတင်းအချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်၊ ထို့နောက်စာအိတ်မှတစ်ဆင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောရေငုပ်ခြင်းကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကအကြောင်းအရာအတိမ်အနက်ပါပဲ။
Tags: စာရင်းစစ်အကြောင်းအရာလိုင်းများအကြောင်းအရာအတိမ်အနက်ကိုအကြောင်းအရာအလတ်စားအကြောင်းအရာ၏အတိမ်အနက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ကွမ်းခြံကုန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်personaintent ည့်သည်ရည်ရွယ်ချက်မြင်သာသောအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဘာလဲ
4:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 47 တွင်
ဒါတကယ်ကောင်းတယ် Doug။ ဒီတပတ်နှောင်းပိုင်းမှာ သတင်းထွက်ဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
5:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 04
မစောင့်နိုင်တော့ဘူး၊ @facebook-1229758293:disqus !